सञ्जीवको ब्लग: सुदूर-पश्चिम यात्रा दैनिकी
बुडर पुग्नुअघिको चर्चित भासुभिर
अत्तरियाको अत्यासलाग्दो गर्मी छलेर बुडर उक्लिन नपाउँदै झोलाबाट सुइटर, ज्याकेट निकाल्ने हतार भइहाल्छ । उसै त सदाबहार चिसो स्याँठ त्यसमाथि त्यसदिनको उराठलाग्दो झरी । सहकर्मी राजुले होटल साहुसँग खासखुस गरेर लोकल कुखुराको मासु र भातको बन्दोबस्त गरिहाले । भात कुर्दाको अल्छी काट्न निराजनले मोबाइलबाट सुदूर-पश्चिमको भाखा घन्काए -
चौबन्दी ढाकाको चोलो छिटका फरिया की
बाँचकली घर काँ हो तम्रो बैँस भरियाकी
राइझुमा झुमा क्या मस्क्याकी छौ हो राइझुमा ।
भोलिपल्ट राम्रोसँग घाम झुल्किन नपाउँदै हामी जोगबुडातिर सोझियौँ । राजुले गाडीको रेडियो खोले । समाचार वाचकहरू ठूलोठूलो स्वरमा उत्साहित भएर ‘फलानो नेता फलानोसँग छलफल गर्दै, सहमति जुटाउने प्रयास जारी, बन्दको घोषणा यथावत, संविधानसभाको बैठक बस्ने’ आदिआदि समाचार पढ्दैथिए । राजुलाई अल्छि लागेछ क्यारे –‘तेसका बाजे’ भन्दै एकैछिनमा रेडियो बन्द गरे ।
पूरानो जोगबुडा गाविस । हालको नयाँ नगरपालिका । जनसंख्या लगभग ५० हजार –समग्र डडेलधुरा जिल्लाको आधा भनेपनि हुन्छ । बुडरबाट ३५ किलोमिटर कच्चिबाटो । यात्रा झन्डै २ घण्टाको । वर्षायाममा खोला बढ्छन्, गाडी चल्दैनन् ।
सुदूरपश्चिमको अविकासको पोल जोगबुडाको नवघोषित अस्पतालले पनि राम्रैसँग खोल्नसक्छ । दुई डाक्टर र अन्य स्वास्थ्यकर्मी भएको १५ सैयाको अस्पतालले नगरपालिका र वरपरको ठूलो जनसङ्ख्यालाई सेवा दिइरहेको छ । कर्मचारीले बलबुताले भ्याएको गरेकै छन् । तर, जोगबुडालाई अस्पताल भन्नका लागि आवश्यक न्युनतम पूर्वाधार छैनन् । सामान्य एक्स-रे र ल्याब त छन् तर सुत्केरी जाँचका लागि अत्यावश्यक अल्ट्रासाउन्ड मसिन छैन । आधारभूत र कम खर्चिलो मानिने इसिजी सेवा छैन । अस्पतालसँग एम्बुलेन्स छैन । सुत्केरी गराउँदा गराउँदै बत्ती जान्छ, यस्तो बेला चाहिने वैकल्पिक बत्तिको व्यवस्था छैन । सामान्य खालकै विसञ्चो वा सुत्केरीमा समस्या भए धनगढी वा अन्य ठाउँ जानुको विकल्प छैन ।
विकास-निर्माणका लागि प्राथमिकतामा परेको जिल्ला र तुलनात्मक रूपमा सुगम ठाउँका बासिन्दाको आधारभूत भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्यसेवामा पहुँच नहुनुमा सात दशक लामो विकास प्रयासको अप्रभावकारिता झल्किन्छ । यो दुखद परिस्थिति स्थानीय मानिसका लागि अब स्वभाविक भइसकेको छ, तर देशका नीतिनिर्मातालाई जनताको यो दु:खले पोल्दैन ।
बुडर फर्केर भात खाँदा अपरान्हको २ बजिसकेछ । स्याउले बजार हुँदै दिपायल पुग्नुछ । लगभग ४ घण्टाको यात्रा । थकाइ मार्दै जाने हो भने झमक्क साँझ पर्दामात्र दिपायल पुगिने देखियो । बाटोभरि जोगबुडा अस्पतालका नर्सहरूसँगको कुराकानी मनमा खेलिरह्यो । खोला बढ्दा नजिकैको गाउँमा कठिन सुत्केरी गराउन जान नसकेको र मोबाइलबाट उताका स्वास्थ्यकर्मीलाई सिकाउँदाको कठिनाइको कथाले मन पोलिरह्यो ।
स्याउले बजार पुग्दा अपरान्हको झन्डै ४ बजिसकेको थियो । ओर्लेर चिया खाने सल्लाह भयो । गाडामा बेच्न राखेका मौसमले ध्यान ताने । हेर्दा उति राम्रा र रसिला नदेखिए पनि ५० रुपैयाँ किलोमा पाइने स्थानीय मौसम उल्का मिठा रहेछन् । स्याउलेमा एकछिन थकाइ मारेपछि हाम्रो गाडी दिपायलतिर तेर्सो लाग्यो ।
स्याउले बजारबाट दिपायलसम्मको ५० किलोमिटर बाटो प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको छ । वरिपरि पहाडले घेरिएको खोला किनारको लामो र सम्म ठाउँ सुन्दर उपत्यका झैँ लाग्छ । सेती नदीको किनारै किनार सुलुलु बग्ने बाटाका दुबैतिर ग्रामिण बस्ति छन् । जुनसुकै मौसममा पनि बालिनालीले खेतबारी भरिएकै हुन्छन् । मान्छेको चहलपहल पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
स्याउलेबजारबाट दिपायल जाने बाटोबाट देखिएको दृश्य
तर, यो सुन्दर ठाउँको यात्रामा मेरो मन एकतमासले पोल्छ, सधैँ । हरेक पटक यो बाटो हिँड्दा मैले महिलाले कठीन परिश्रम गरेको र पुरुषले आराममात्र गरेको देखेको छु । खेतबारीमा गोडमेल गर्ने, खन्ने, बालीनाली काट्ने, चुट्ने, केलाउने, भारी बोक्ने काम लगभग सतप्रतिशत महिलाले मात्र गरिरहेका हुन्छन् । नाम्लोमा बडेमानका घाँसदाउराका भारीदेखि ठूलाठूला काठका मुढा काँधमा बोकेर हिँडिरहेका महिला र बालिका देखेर मन अमिलो हुन्छ । पुरुषहरूले फाट्टफुट्ट काँधमा छाता अड्याएर गाइबस्तु चराइरहेको र घर बनाउने डकर्मीको काम गरेको देखिन्छ । अधिकांश पुरुषहरू आँगन, चौतारा र सडकछेउका चियापसलमा सुस्ताइरहेका हुन्छन् ।
कतै कसैले लेखेको पढेको थिएँ –“घाम पनि अस्ताउनमात्र आइपुग्छ सुदूर-पश्चिम” । स्याउले बजारदेखि दिपायलसम्मको यात्रामा सुदूर-पश्चिममा निरन्तर अस्ताइरहेको घाम नजिकबाट देख्न सकिन्छ ।
दिपायलको ‘रिभरसाइड’ होटल पुग्दा झमक्क साँझ परेछ । खाना खाएर कोठामा पुग्दा २ दिनदेखिको वर्षाले उर्लेको सेतीको गाढा आवाज कानमा गुञ्जियो । झ्याल बन्द नगरे निदाउनै गार्हो पर्ला झैँ पो भयो । भोलिपल्ट बिहानै अछामको मङ्गलसेन पुग्नु छ –भेटघाट पनि बाक्लै छन् ।
वर्षा रोकिने छाँट छैन । राजुले भने ‘बाटो राम्रो छ, केही डर छैन ।’
अछाम र डोटी छुट्याउने कुनै विशेष प्राकृतिक सीमाना छैनन् । डोटीको सदरमुकाम सिलगढी पार गरेर अघि बढेपछि चौखुट्टे भन्ने ठाउँमा प्रहरीले बनाएको सानो चेकपोस्ट छ । हाम्रो गाडी चेकपोस्ट पुगेपछि ड्युटीमा रहेका प्रहरीले छाता ओडेर अल्छी मान्दै बाँसको ढाट उठाइदिए । हामी अछाम पस्यौँ ।
टाढाबाट अछामको साँफेबगर
अछामलाई अति दुर्गम जिल्ला भन्न मिल्दैन । जिल्लालाई पिच सडकले देशसँग जोडेको छ । बिजुलीबत्तीको प्रबन्ध छ । टेलीफोन र मोबाइल फोनमा मानिसको पहुँच छ । सरकारी विद्यालय र अस्पताल पनि छन् । तर, यी सबैका बाबजुद अछाम नेपालको अविकासको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हुनसक्छ । अछामीहरूको औसत आयु ५८ वर्षभन्दा कम हुनु र महिला साक्षरता ४० % भन्दा कम हुनुले सम्भवत धेरै कुरा आफैँ प्रस्ट पार्छन् ।
अछामलाई बुझ्न खोज्दा भेउ पाएँ –नेपालको यो दुर्गम जिल्लाको अस्तित्व भारतको अर्को कुनाको कुनै ठूलो शहरसँग गाँसिएको रहेछ जसको नाम हो मुम्बइ ।
अछामका अधिकांश पुरुष बम्बै भनिने मुम्बइमा काम गर्छन् । कतिपय स्थायीरूपमा काम गर्छन् भने खेतबाली लगाइसकेपछि मूलढोका थुनेर परिवारसहित कामको खोजीमा बम्बै जानेको सङ्ख्या पनि उति नै छ । अछाम घर भएका सहकर्मी निराजनसँगको गफगाफबाट बुझियो –अधिकांश पुरुष ‘सेठ’का लागि काम गर्दा रहेछन् । ड्राइभिङ्ग, सिकर्मी आदि अर्धदक्ष र दक्ष पेशामा पनि अछामीहरूले बम्बैमा काम गर्नेरहेछन् ।
साँफेबगर पुग्न झन्डै १ घण्टा बाँकी हुँदा चिया खान रोकियौँ । बाटामा चार महिला र एक पुरुष उकालो चढिरहेका देखिए । उनिहरूलाई रोकेर गफ सुरु गरेँ । दिनभरिको बाटो धामी भेटेर आएका रहेछन् । साँफेबाट चौखुट्टेसम्मको पैदल यात्रा । हरेक महिलालाई ‘तपाईंका छोरा कहाँ छन् ?’ भनेर सोधेँ । एकजना बाहेक तीनैजनाको जवाफ एउटै थियो –बम्बै ।
बाटामा जो भेटिए
साँफे कटेर मङ्गलसेन पुग्ने बेलामा राजुले भने ‘मङ्गलसेन नगरपालीका आइपुगेको थाहा पाउन सजिलो छ ।’ मैले सोधेँ –‘कसरी ?’ उनको जवाफ थियो ‘राम्रो बाटो सकिएर कच्ची बाटो र खाल्डाखुल्डी सुरु हुन्छन् ।’ नभन्दै अछामको सदरमुकाम मङ्गलसेन नगरपालिकाभित्रको सडक कुनै दुर्गम ठाउँमा भर्खरै खनिएको कच्ची सडकभन्दा कम रहेनछ । मङ्गलसेन नगरपालीकाभित्रको बाटो र यहाँको अव्यवस्थित बस्ती हेर्दा लाग्थ्यो हामीले बुझेको नगरको परिभाषामा गम्भीर समस्या छन् ।
मङ्गलसेनको काम सक्दा झमक्क साँझ परिहाल्यो । ‘साँफे झरेर बास बसे भोलि बिहानै दिपायल फर्किन सजिलो हुन्छ’ -राजुको सुझाव सही लाग्यो । हामी साँफे झर्यौँ ।
बाटामा निराजनले हातेफोनबाट पुरुष स्वरको ठाडी भाखा घन्काए :
पैया गुडन् लाग्या
बम्बै जाने रेलगाडीका
अब छुटन् लाग्या
पहाडका डाँडा खोला
रोइदिन्या कोइ छैन
टोपी मैली धोती मैली
धोइदिन्या कोइ छैन
यो गीत दोहोर्याइ, तेहेर्याइ सुन्दै र अछामका दु:ख गुन्दै हामी साँफे झर्यौँ । नेपालको अविकास र असमानताको कथा बोकेर अछाम २१ औँ शताब्दीमा १२ औँ वा १३ औँ शताब्दी बाँचिरहेको छ । यता हाम्रो देशका नीतिनिर्माता काठमाडौँदेखि हेटौँडासम्म सुरुङ्गमार्ग खनेर विकासको बाजी मार्ने दाउमा छन् ।
सहयात्री सहकर्मी दायाँबाट क्रमश: तिर्थ शिन्हा, दया चौधरी, राजु बिक र म
Posted by Sanjeev at 11:45 AM
कबस्सेरो April 13, 2015 at 10:44 AM
Trying to remember the exact location of the second picture from top. Do you still remember that place?
Unknown March 8, 2021 at 4:53 PM
This is my home place is Called Sakayal way to Dadeldhura to Dipayal , Ganyabdhura R.M.3 , thank you for photo and features